5/10/2013 11:30:00 AM Unknown No comments
ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ (ခ) လင်းယံခ (မြန်မာစာ)
လင်းယံခ (မြန်မာစာ) မှ ကြိုဆိုပါ၏
5/10/2013 11:28:00 AM Unknown No comments
ကျွန်တော် ရွှေမန်းသားလေးမှ ပရိသတ်များကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ကစပြီး ဒီဆိုက်လေးမှာ မရေးတော့ပါ။ အရင် ရွှေမန်းသားလေး apk အသုံးပြုနေသူများအနေနဲ့ ယခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ လင်းယံခ apk သို့ ပြောင်းလဲထည့်သွင်းပေးပါရန် အကြံပြုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီဆိုက်ကလေးကိုတော့ လေ့လာသူများ အဆင်ပြေစေရန် မဖျက်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားပေးထားပါမယ်ဗျာ။ နောက်ပိုင်း တင်သမျှပိုစ့်တွေကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ လင်းယံခဆိုက်သို့ လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါတယ်ဗျာ။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်မှ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်။
Mirror Download Link 1 (Mediafire) >>> http://www.mediafire.com/?pub010rp0zg7917
Mirror Download Link2(Zippyshare) >>> http://www18.zippyshare.com/v/7199446/file.html
Mirror Download Link3(Dropbox) >> https://www.dropbox.com/s/lpus5dv4mc8yc2r/linnyankha_v1.0.apk
4/08/2013 08:21:00 PM Unknown No comments
4/08/2013 08:20:00 PM Unknown No comments
၂၀၁၃-ခု၊ ဧပြီလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
4/08/2013 08:17:00 PM Unknown No comments
ဒီလအတွင်းမှ အဖက်ဖက်က အခြေအနေကောင်းတွေ ကြုံလာမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အထူးတိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ကာလ သမယပါပဲ။ မိတ်ကောင်း ဆရာကောင်းတွေ တွေ့မယ်။ စပါတူ ရှယ်ရာ အလုပ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီး၊ ပညာရေးကိစ္စတွေ အထူးကောင်းပါတယ်။ ဆန်ဆီဆေးဆား၊ စက်မှု့၊ စာအုပ်၊ မြေ ၊ အမွေ၊ ဖုန်း ကိစ္စများမှာ အောင်မြင်မယ်။ အလှူအတန်း မင်္ဂလာကိစ္စများနဲ့လည်း ကြုံကြိုက်ရ တတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး လုပ်သလောက်၊ ကံပွင့်လန်း နေမယ့် ရက်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေမျိုးသားချင်း တွေနဲ့တော့ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ လူရင်းတို့ရဲ့ မကောင်းသတင်း တချို့လည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အထည် ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ရွှေ၊ အောက်လက်ငယ်သားတို့ အတွက်တော့ စိပ်ရှုပ်ခေါင်းစား ရတတ်ပါတယ်။
ချစ်သူရည်စားများ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေကြုံလာမယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်ဆိုရင် အညံ့များနေတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးမယ်ဆိုရင် (၃၅)ပူးနေတဲ့ ထီလက်မှတ်ဟာ လာဘ်လာဘတွေ ခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒူး၊ နား၊ ရင်ဘတ်၊ သတိထားပါ။
3/25/2013 07:29:00 PM Unknown No comments
Psycheက (စိတ်ဝိညာဉ် သို့မဟုတ် လိပ်ပြာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်) ဘုရင်ရဲ့တတိယမြောက် သမီးတော်ဖြစ်တယ်။ သမီးတော်သုံးပါးစလုံး ပန်းလိုလှကြတယ်ဆိုပေမယ့် သမီးထွေး Psycheရဲ့အလှက ပိုသတင်းမွှေးခဲ့တယ်။ သူ့အလှကြောင့် လူတွေကသူ့ကို နတ်သမီးတစ်ပါးအလား ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ကြတယ်။ တစ်ချို့က အလှနတ်သမီးလေး ဝင်စားထားသလားတောင် ထင်ခဲ့ကြတယ်။
3/11/2013 05:16:00 PM Unknown No comments
လိပ်ကလေးက စကားပြောတယ်လို့ဆိုလျှင် စာဖတ်သူတို့ ယုံကြည်မှု ရှိနိုင်ကြပါမလား? ယုံချင်ယုံ- မယုံချင် အင်္ဂလန်က ပုံပြင်တစ်ခုလို့သာ မှတ်ကြပါ။ တကယ်တော့ လူတွေကသာ နားမလည်ကြတာပါ၊ အဟိတ် တိရ စ္ဆာန်တွေဟာ သူတို့၏ ဘာသာဘာဝ စကားကို ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် ပြောဆိုကြတာကို သူတို့က အချင်းချင်း နားလည်ကြပါတယ်။ သာယာမြည်ကျွေး တေးကလေးတွေလည်း သီဆိုတတ်ကြလို့ ကလူကြည်ဆယ် ပျော်မြူးကြလို့ ဟုိုပြန် ဒီပြေး လုပ်နေတတ်တာကို တွေ့ဘူးနေကြမှာပါ။
3/09/2013 05:39:00 PM Unknown No comments
3/09/2013 05:37:00 PM Unknown No comments
ကုသိုလ်ဆိုသည်မှာ ယူတတ်လျှင် ရသည်။ နည်းသည်, များသည် ပဓာန မဟုတ်။
လမ်းသွားနေခိုက် စေတီပုထိုး ရဟန်း မြင်လိုက်ရလျှင် လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ရမယ်။
ကားစီးနေခိုက် မေတ္တာဘာဝနာအလုပ် လုပ်နိုင်တယ်။
လမ်းလျှောက်နေစဉ် ၀ိပဿနာသတိပဋ္ဌာန် ပွားနိုင်တယ်။
အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ အိပ်ရာဝင် အိပ်ရာထမှာ တနေ့ ၂-ကြိမ် ဘုရားဝတ်ပြု၍ ပရိတ်ရွတ်နိုင်ကြတယ်။
စိတ်ဝီထိ ဇောများ စေတနာများ အလွန်မရေတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ပေါ်နေ၍ . .
ခဏကလေး ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းမှုကို အထင်မသေးသင့်ပေ။ ရသောအချိန်မှာ ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင် နေသင့်လှပေသည်။
( မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး )
မြန်မာမှာမမြင်ဘူးသော Phone ရဲ့ internet Speed ကို မြင့်မယ်
3/09/2013 05:36:00 PM Unknown No comments
ပထမဦးစွာ မိမိဖုန်းကို “WCDMA only” mode ကိုပြောင်းပါ
3/09/2013 05:29:00 PM Unknown No comments
စိတ်တိုဒေါသဖြစ်တယ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်တယ်၊ အလိုမကျဖြစ်တယ်.. စတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေက ပုံမှာပါတဲ့သစ်ပင်လေးလိုပဲ
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီသစ်ပင်(စိတ်တိုဒေါသ)ကို ရေမပြတ်လောင်းပေးရင် သစ်ပင်ကြီးလာတဲ့တစ်နေ့
ကြိုးက ကျွန်တော်တို့ကို ဆွဲကြိုးချသွားမှာပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို မပြုပြင်၊ မပြောင်းလဲနိုင်သရွေ့
ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိုက်သင့်သလိုပေးဆပ်နေရမှာပဲ...
3/09/2013 05:26:00 PM Unknown No comments
3/09/2013 05:22:00 PM Unknown No comments
"အဖေ... အဖေ.. အ ဖေ.. တံခါးဖွင့်ပေးပါဦး.. ကျွန်တော်က အဖေ့သားပါ.. သား သော့မေ့ခဲ့လို့"
3/09/2013 05:20:00 PM Unknown No comments
ထမင်းအသက် ၇ ရက်၊ ရေအသက် တစ်မနက်လို့ဆိုသလို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၆ဝ~၇ဝ%ခန့်က ရေဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်စာရေးဆရာ ဆရာဝန် F.Batmanghelid က "Your Body's Many Caries For Water" ရေက အကောင်းဆုံးဆေးဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ "သင် မဖျားပါဘူး... သင် ရေဆာနေတာပါ"လို့ သူကဆိုပါတယ်။
3/07/2013 06:44:00 PM Unknown No comments
3/07/2013 06:42:00 PM Unknown No comments
3/07/2013 06:41:00 PM Unknown No comments
3/07/2013 06:40:00 PM Unknown No comments
မြွေဟောက်ဘုရင်သာ ဆိုပါတယ်။ အမှန်တော့ သူက မြွေဟောက်မျိုးရိုး ထဲမှာမရှိပါဘူး။ King Cobra ဆိုပြီး သူ့ Gene က သက်သက်ရှိနေ ပါတယ်။ မြွေဟောက်ဘုရင်လို့ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သူဟာ မြွေကို မှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားသုံးတတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
3/07/2013 06:39:00 PM Unknown No comments
3/07/2013 06:36:00 PM Unknown No comments
၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက နယ်သာလန်နိုင်ငံ တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ် တစ်ခုမှာ ဂေါ်ရီ လာ (Bokito အမည်ရ) မျောက်ဝံတစ်ကောင်ရဲ့  တိုက်ခိုက်မှုကို လူသုံးလေးယောက် လောက် ခံလိုက်ရပါတယ်။
3/06/2013 01:37:00 PM Unknown No comments
ရှင့်ကို ကျွန်မတွေ့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ ကျွန်မတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါ ကျွန်မရဲ့မာနမဟုတ်ဘူး။ ရှင့်ရှေ့မှာ ကျွန်မအဖို့ မာနဆိုတာမရှိဘူး ဒါကို ရှင်သိပါတယ်။
ရှင်လည်း ကျွန်မကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှ ကျွန်မတို့ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းက အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာမို့ပါ။
ရှင်လည်းကျွန်မကိုချစ်၊ ကျွန်မကလည်း ရှင်ကိုချစ်မှ ဒီအချစ်က အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်
---- ပြင်သစ်စာရေးဆရာမ Simone de Beauvoir (Jan 9, 1908-- April 14, 1986)
3/06/2013 01:01:00 AM Unknown No comments
လူတစ်ယောက်အတွက် အပြုံးဆိုတာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ကြည့်ရအကောင်းဆုံးသောအရာ
လူတစ်ယောက်အတွက် ယုံကြည်မှုဆိုတာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အဖိုးအတန်ဆုံးသောအရာ
လူတစ်ယောက်အတွက် မိသားစုဆိုတာ သူ့ဘဝမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာ
လူတစ်ယောက်အတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ သူ့ဘဝမှာ အရခဲဆုံးသောအရာ
မနက်လင်းတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုံးတစ်ပွင့်ပေးဖို့ မနှမြောပါနဲ့
ဘာလုပ်လုပ် ယုံကြည်မှုတွေ ကိုယ်နဲ့အတူရှိနေပါစေ
သူငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ အမြဲဆက်သွယ်ပါ .
3/06/2013 12:59:00 AM Unknown No comments
ဒါပေမယ့် တခြားလူရဲ့အသိပညာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်ငယ်အောင်မလုပ်မိပါစေနဲ့
ဆိုက်အသစ်သို့သွားရန်>>> လင်းယံခ (မြန်မာစာ) ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ (ခ) လင်းယံခ (မြန်မာစာ)
ထမင်းအသက် ၇ ရက်၊ ရေအသက် တစ်မနက်လို့ဆိုသလို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၆ဝ~၇ဝ%ခန့်က ရေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ ဆရာဝန် F.Batmanghelid က &q...
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတော်တော်များများ ဟန်းဖုန်းကိုင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ အချို့ မျှဝေလ...